IWaterfront Oasis w iMibono yoLwandle kunye nePiti yaBucala!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJared
Wamkelekile kwiHidden Oasis eOak Island!
Indlu enkulu enemigangatho emi-3 ephambi kwendlu yasemanzini yaseCharleston igqibelele ene-266-foot pier yabucala ewela phezu kwechibi lezilwanyana zasendle elisecaleni kwaye uhle uye kwidokhi yakho yabucala edadayo kwiDavis Canal. Ngaphezulu kwe-1,000 sq ft yeeveranda kunye nedesika, nganye inembonakalo yayo eyahlukileyo. Indawo enkulu ebiyelwe phambi kweyadi kunye neyadi evulekileyo yangasemva enendawo enkulu yomlilo. Le ndawo yekona ikhethekileyo ibamba iimbono zaseLwandle kunye neCanal kwaye inokufikelela elunxwemeni kwizitrato ezimbalwa kude!
I-Hidden Oasis e-Oak Island yindawo yokuya ekhefini ngokwayo--thatha imbono yolwandle ukusuka kwenye yeedekhi ezine ezinkulu ngelixa usonwabela ikofu yasekuseni, hamba i-pier yabucala phezu kwechibi elifihlakeleyo lezilwanyana zasendle ukuya kwidokhi edadayo enikezela ukufikelela ekulobeni, kayaking. kunye nokubheqa kunye nendawo yokupaka ijethi yakho yokutyibiliza okanye isikhitshane kumjelo, ukutshiswa lilanga kwaye uqubhe elunxwemeni lwezitrato nje ezimbalwa, emva koko uphothule imarshmallows egcadiweyo ejikeleze iqula lomlilo.
Eli gumbi lokulala linamagumbi ama-4 (kunye nendawo yokulala eyongezelelweyo yesi-5) ikhaya lentsapho elenziwe ngesitayela saseCharleston lakhiwe ngazo zonke iintsimbi kunye neempempe ukwenza iholide yakho ingalibaleki. Iindawo zokuhlala zivulekile kwaye ziqaqambile ngophahla oluphezulu kunye nolwandle, umjelo, kunye neembono zamachibi ezilwanyana zasendle. Ikhitshi ekwinqanaba le-3 ligcwele ngokupheleleyo i-cookware ephezulu kunye nezixhobo zombane. Kukho izihlalo ezininzi kuzo zonke izidlo zakho kwindawo yokutyela okanye kwibha yasekhitshini. Emva kwesidlo sangokuhlwa, phumla kwi-jetted Jacuzzi tub, okanye uhlaziye emva kosuku olude elunxwemeni kwishawa enethayile enkulu enemvula ephezulu/intloko yeshawari kunye neejethi zamanzi zokuphulula ezi-6 ezahlukeneyo.
Iidekhi ezi-4 ezinkulu kunye neeveranda ezinkulu ezinezihlalo ezikhululekileyo zivumela ukuphumla ngendalo kunye nemibono ephefumlayo ngelixa uphefumla umoya omtsha wolwandle. Imbonakalo-mhlaba ebiyelweyo yetropikhi yenza eli khaya lilungele ukuhlala kwiholide nabantwana kunye nezilwanyana zasekhaya.
Ngokhetho oluninzi lwangaphakathi lokuzonwabisa olubandakanya i-Arcade Lounge ene-arcades ezisi-8, iiTV zescreen esicaba kunye neNetflix, iHulu, kunye neAmazon Prime kwigumbi ngalinye, kunye negumbi lomdlalo elikwinqanaba elisezantsi elineping-pong, foosball, iidati, umdlalo we-600 weSuper. Iseti kaNintendo, iiTV ezimbini zescreen esicaba ezingama-50, iBlu-Ray/iDVD player, itafile yepoker yobuchwephesha, imidlalo yebhodi, iipuzzle, njl.
Amathuba angenasiphelo kwi-Hidden Oasis! Iinkumbulo ezingalibalekiyo zikulindile!!
Buza kwakhona malunga nepropathi yethu ethi "Tranquil SeaClusion"-indawo yokuhlala efihliweyo enoxolo kude nolwandle!
-Izikhephe/iijethi zokurenta kwi-Blue Water Point Marina
-Ukukhwela iKayaking, ukuHamba ngePaddle, kunye nokuhamba ngephenyane
-Ukurenta ngeBhayisikile/Ukuhamba ngenqanawa
Indawo yokutyela ePhezulu iquka iKoKo Cabana, Indlu yeentlanzi, iKai Joes yokutya okumangalisayo okukhawulezileyo kwaseMexico, indlela yeSiqithi yesidlo sangokuhlwa esimnandi emanzini kunye nemibono yokutshona kwelanga.
-Imiqulu yokuloba, ukuloba e-Ocean Crest okanye kwi-Oak Island Pier okanye kanye kwi-pier yakho kunye ne-dock edadayo.
-Ukudlala iGalufa esiqithini (iKlabhu yeGalufa yase-Oak Island, i-South Harbour Par 3)
- Ukuthenga, iinkundla zebhola yomnyazi, iinkundla zentenetya, ipaki yebhodi yokutyibiliza yoluntu
-Iipaki ezininzi ezahlukeneyo zikawonke-wonke, ii-arcades, iivenkile ze-ice cream, putt putt kunye neelwandle ezintle
-Imbali yaseSouthport yimizuzu nje kude
-I-Ferry ikhwela kwi-Bald Head Island kunye ne-Bald Head Island Lighthouse.
-Isiqithi sase-Oak sikwimizuzu nje engama-35 ukusuka eWilmington, NC kunye neyure enye ukusuka eMyrtle Beach kuye nabani na ojonge uhambo losuku olumnandi!
-Ukukhwela iFerry ukuya kwiNdawo yoLonwabo yaseFort Fisher kunye neAquarium
-INdawo (Iimbono ezintle zepanoramic kunye neendawo ezinkulu ezivulekileyo zolwandle).
-I-Oak Island Lighthouse
-Battleship North Carolina
-Inqwelo yegalufa yokuRenta
-Imiboniso bhanyabhanya yeSurf
-Oak Island Splash Pad @ Middleton Park
I am a Corporate Tax Director originally from Goldsboro, NC living outside of Charlotte, NC (Lake Wylie, SC). I bought this property in March 2019 from a well-respected builder who had built the home for his personal residence in 2008. I love the property both from a guest and owner perspective! I am passionate about finding ways to improve the property and adding things to make it unique as possible!
I am a Corporate Tax Director originally from Goldsboro, NC living outside of Charlotte, NC (Lake Wylie, SC). I bought this property in March 2019 from a well-respected builder who…